कृषिमा जमिनी निती नभएकै कारण युवाशक्ति विदेश प्लायन हुँदैछन् : प्रा. डा. दिपक शाक्य - Birgunj City
आज: | Sun, 31, May, 2020
कृषिमा जमिनी निती नभएकै कारण युवाशक्ति विदेश प्लायन हुँदैछन् : प्रा. डा. दिपक शाक्य
बिरगंज सिटी २७ पुष २०७६, आईतवार २१:०६मा प्रकाशित (४ महिना अघि) १०६२७ पाठक संख्या
वीरगञ्जको लागि मात्र होइन, प्रा.डा. दीपक शाक्य प्रदेश नम्बर २ मा नै उनको नाम प्रचलित छ । २०१७ सालमा वीरगञ्जमा जन्मिएका उनले २०३३ सालमा वीरगञ्जकै माईस्थान विद्यापीठबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका हुन् । मगद युनिभर्सिटी गया, भारतबाट पिएचडी गरेका उनले अध्ययनका क्रममा भविष्यमा शिक्षक बनुला भनेर सोचेकै थिएनन् । पढाइमा तेज रहेका उनलाई डाक्टर वा इन्जिनियर मन थियो । उच्च शिक्षामा उनले व्यवस्थापन संकाय पढे । व्यवस्थापन पढ्दै गर्दा पनि उनलाई म्यानेजर बन्ने सोचेको थियो । तर, पछि शिक्षण पेसामा लागेँ र त्यसैबाट आज उनी सफल प्राध्यापक भएका छन् । ०४३ सालदेखि ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गर्दै आएका छन् र १७/१८ वर्ष यता वीरगञ्जमा वीरगञ्ज पब्लिक कलेजको नामले निजी विद्यालय सञ्चालन गरी प्रदेश २ मै उनको कलेज उत्कृष्ट छ । डा. शाक्य व्यवस्थापन संकाय संगसंगै प्रदेश नम्बर २ कृषिमा आधारित प्रदेश भएको हुनाले यहाँ कृषिसंग सम्बन्धीत ईन्सच्य्ट, कलेज पनि संचालन गर्ने तयारीमा लागेको बताए । उनै डा. शाक्यसँग कृषि क्षेत्र सम्बन्धी वीरगंज सिटीका लागि बलिराम यादवले गरेको संवादको सम्पादित अंश :
१) नेपाल कृषि प्रधान देश भएपनि हालसम्म कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्नुको कारण के होला ?
नेपाल कृषि प्रधान देश भएतापनि कुषि प्रधानलाई नारामा मात्रै सिमित राख्यौ । कृषिलाई कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढ्न सकेनौ, जसका कारण कृषिमा धनी भए तापनि यसको उत्पादन र उपभोगमा हामी पछाडी परेका छौ ।
२) कृषि क्षेत्रको विकासको लागी स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले के कस्तो नीति, योजना अथवा अख्तियारी ल्याउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ?
ब्राजिल, अमेरिका कृषिमा ४ प्रतिशत प्रधान देश हो । तर उनीहरुले कृषि उत्पादनलाई अर्को देशमा पनि विक्रीवितरण गर्ने गर्दछन् । तर हामी कहाँ साढे १७ प्रतिशत जति खेतियोग्य जग्गा छ । जसमा ४०/५० प्रतिशत कृषिमा आधारित छौ । जुन पहिला ८० प्रतिशत भन्थ्यौ । कृषिको यति सम्भावना हुँदा हुँदै पनि हामी ८० प्रतिशत जति खाद्यान्न बाहिरबाट आयात गर्छौ । यसको मुख्य कारण कृषिलाई हामीले समय सापेक्ष आध्निकीकरण गर्न सकेनौ । २१ औं शताब्दीमा पनि हामी कोदालो र हलोले कृषि पेशा गर्दै आईरहेका छौ ।
समय सापेक्ष यसलाई कसरी परिवर्तित गरेर अगाडी बढ्ने भन्ने बारे योजना बनाउनु एकदमै आवश्यक छ । पहिला हामी एक खेतमा एक÷दुई बाली मात्र्रै गथ्र्यौ तर अहिले ४/५ बाली गर्ने गरेका छौ । तर यो रुपान्तरिततिर हामी कहिल्यै पनि लागेनौ । मुख्यतः प्रदेश नम्बर २ को ८ वटै जिल्ला पूर्ण रुपमा कृषिमाथि भर परेको छ । त्यसकारण प्रदेश नम्बर २ को सरकारले कृषिलाई नै पहिलो प्राथमिता दिनु पर्छ ।
भारतको हरियाना जस्तै यो प्रदेशलाई पनि कृषि राज्य घोषणा गर्नु प¥यो । नसके तापनि बारा, पर्सा र रौतहटलाई कृषि जिल्ला घोषणा गर्नु पर्छ । र त्यसमा कृषि व्यवसायको आधुनिकीकरणको एउटा उदाहरण बनाएर खोजअनुसन्धान गरी यसको शुरुवात गर्नु पर्छ । शुरुदेखि नै प्रदेशमा निती, योजना बन्दा मैले आवधारणा राखिदै आईरहेको छु । तर जहिले पनि कृषिलाई फोकस गरेर उद्योगधन्धामा मात्रै ध्यान दिने गरेकोले हामी दिनप्रतिदिन कृषिमा कमजोर हुँदै गईरहेका छौ ।
३) अहिलेको आधुनिकतासंगै कृषकले कम लगानीमै बढी उत्पादन गर्न सक्ने के कस्तो प्रविधि भित्रियाउनु आजको आवश्यकता रहेको छ ?
प्रदेश नम्बर २ कृषिमा आधारित प्रदेश भएतापनि न एउटा कृषिसंग सम्बन्धी कलेज छ, न कुनै ईन्स्च्युट नै । अहिले पनि १७÷१८ गाउँका किसानहरु एउटा जेटिएमा निर्भर रहन्छन् । नेपालको औधोगिक क्षेत्र वीरगंज शहरमा दिनहु किसानहरु मजदुरी गरी कमाएको ४० प्रतिशतको लगानीले कृषि बिज भण्डारबाट बिउबिजन खरिद गर्नमा खर्च गर्छन र कति खाद्य, मल मिलाउने वा छर्ने भन्ने बारे जानकारी पनि त्यही ठाउँबाट लिई कृषि कार्य गर्ने गरेको देखिन्छ । तसर्थः यो अनुपातमा हामी कृषि कार्य गर्दैछौ । सामान्य जानकारी अनुसार हामी एउटै खेतीमा ३/४ बाली खेती गर्न सक्छौ ।
एक : जमिनलाई उब्जाउ भूमि कसरी बनाउने : मल, खाद्य
दोस्रो : बाली लगाउने देखि काट्ने जस्ता विभिन्न नयाँ प्रविधिहरु आईसकेका छन् । त्यसलाई कसरी लागु गरी सदुपयोग गर्ने र कुन बेलामा कुन खेती कसरी गर्ने भने महत्वपूर्ण हुन्छ । जस्तै धानबालीसंगै रहरको दाल रोप्ने, धानबाली सकेपछि सिजनल तरकारी र गेहुसंगसंगै मसुरो र अन्य पनि विभिन्न तरकारी बाली लगाईने गरिन्छ । मुख्यतः यसलाई गोड्ने कसरी ? मल कसरी दिने ? यो प्रविधि बारे जानकारी भयो भने अहिले एउटै खेतीमा ३/४ बाली गर्न सक्छौ । त्यसतै जमिनको गुणस्तर हेरी मल दिईयो भने जुन जमिनबाट ५० मन धान उत्पादन हुन्छ त्यहा“बाट २०० मन धान उब्जाउन सकिन्छ । जस्तै, पहाडमा एउटा रातो मूला २ किलोको हुन्छ भने तराईतिरको मूला एकरदुई कानवा (पाउ) मात्रै हुन्छ । त्यसतै पहाडतिरको फर्सी ४/५ केजीको हुन्छ भने हाम्रो ठाउँको १\_२ केजीको मात्रै हुन्छ । यो अनुसार एउट किसानले २ केजी मूलाको १५/२० रुपैया पाईरहेको छ भने अर्को किसान २ कानवा (पाउ)को २ रुपैया मात्रै पाईरहेको छ । यसरी एउटाको उत्पादन र मुल्य पनि बढि भयो नि । यो कसरी भयो ? कृषि प्राविधिको देन हो । त्यसकारण कृषि प्रविधिमा यो प्रदेश धेरै नै पछाडी छ ।
कृषकहरुलाई अहिलेको आवश्यकता अनुसारको प्रविधि उपलब्ध गराउन सकेको छैनौं ।
त्यसतै उन्नत जातको बिउबिजन, मल, खाद्यको अभावमा पनि यहाँका किसान भारतबाट मल, खाद्य किनेर ल्याउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यो बिउबिजन गुणस्तर छ कि छैन भन्ने बारे हामीलाई थाहा पनि हुदैन् । त्यस्तै बाली लगाएको किसानले सिचाईको अभावमा आर्थिक रुपले कमजोर भई ३/४ बाली लगाउन सक्दैन र लगाएको बाली पनि सिचाई पम्पिड्ड सेट, बाली काट्ने मजदुर राख्नै पर्ने जस्तामा लगानी गर्नै पर्ने हुन्छ, तर यहाँको किसानहरुको आर्थिक सम्मुन्नती धेरै नै कमजोर भएको हुनाले पनि यसमा लगानी गर्न नसकेर किसान मर्कामा पर्ने गरेका छन् । यस कारण पनि हाम्रो उत्पादन घटिरहेको छ ।
४) प्रदेश नम्बर २ कृषिमा आधारित प्रदेश भएपनि यहाँका कृषकहरु कृषि पेशा छोडेर अन्य पेशामा लाग्ने गरेको देखिन्छ नि ? के कारण होला ?
कृषिप्रति प्रदेश सरकारको कुनै आकर्षित नीति नभएुर नै कृषकहरु कृषि पेशा छोडेर अन्य पेशातर्फ पलायन हु“दै गईरहेका छन् । भारतको पंजाब, हरियानामा पनि पहिला कृषिबाट मानिस पलायन हुँदै गएका थिए । तर जय जवान, जय किसानप्रतिको जब नारा आयो र हरियानालाई कृषि राज्य घोषित गरेर किसानहरुलाई बाटोघाटो, ऋण, सुरक्षा, सम्मान सबै दिएपछि त्यहाँका कृषकहरु आकर्षित भए अनि त्यहाँबाट कृषि उत्पादन फस्टाउँदै गयो । तर प्रदेश नम्बर २ मा किसानलाई आकर्षित गर्ने कुनै पनि किसान नीति छैन् ।
कृषि प्रधान नारामा मात्रै सिमित रहेको देखियो । अहिलेको समयमा किसानको उत्पादित भूमि मरुभूमिको दिशा तर्फ परिवर्तित हुदै गईरहेको अवस्था छ । हामी भन्छौ, हामी तराईमा छौ, तराई भनेको कृषि उब्जनीको भूमि हो तर सबैभन्दा बढि उत्पादन हुने जमिन दिनानुदिन बालुवामा परिणत हँुदै गईरहेको छ, जुन राज्य र देशको लागी धेरै नै चिन्ताको विषय हो । कारण एउटा बाटो बनेको ठाउको सबै जग्गा प्लटिङ्ग भएर व्यवसायीकरण भईरहेको छ । किसानहरुसंग सस्तोमा जमिन किनेर भूमाफियाहरु प्लटिङ्ग गरेर बेच्न गरिरहेको सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो । त्यसतै ठुल–ठुला उद्योगी व्यापारीहरु पनि व्यापार व्यवसाय संचालनको लागी आवश्यकताभन्दा बढि जग्गा खरिद गरेर लाईन ओगटिरहेका छन् ।
एक विगहामा फ्याक्ट्री खोल्ने अनि ५ विगहा जमिनलाई उत्पादनहिन बनाएर राख्ने जस्ता रवैयाले पनि उब्जाउ जमिन दिनप्रतिदिन खण्डहर बन्दै गईरहेको अवस्था छ । तसर्थः प्रदेश नम्बर २ लाई कृषि राज्य घोषणा गरी किसानका उब्जाउ जमिनलाई कृषि उत्पादनमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ । उत्पादन हुन नसक्ने ठाउँमा मात्र उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोल्नुपर्छ ।
५) प्रदेश नम्बर २ लाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन के गर्नु पर्छ ?
हिमालदेखि तराईसम्म हाम्रो देशमा समुन्द्र र मरुभूमि छैन् । तराई भनेको अन्नको भण्डार हो । आजभन्दा २० वर्ष अगाडी नेपालबाट उत्पादित चामल, दाल, तरकारी भारत, श्रीलंका, बंगलादेशमा पठाउने गथ्र्यौ तर अहिले ९० प्रतिशत दाल, चामल, तेल जस्ता अर्बौ रुपैयाको खाद्ययबस्तु अन्य देशबाट भित्रियाउनु परिरहेको छ ।
विदेशमा बिक्रि गरिने हामी आज किन विदेशबाट खरिद गरिरहेका छौ रु तसर्थः कृषिलाई हामीले कहिले पनि प्राथमिकतामा नराखि नारामा मात्रै सिमित राख्यौं । आज नेपालमा ७/८ वटा औधोगिक क्षेत्र छ तर कृषि क्षेत्र एउटा पनि छैन । आज पनि तराईका किसानहरु आकासे पानीको भर परी कृषि कार्य गर्ने गर्छन् । जबकी तराईमा एक सय फिट गहिरो पाईप हाल्यो भने त्यहाँबाट पानी आउँछ । यदि कुनै ठाउँमा एउटा पम्पिङ्ग सेट लगाई दिईयो भने त्यो ठाउँमा पानी फालाफाल हुन्छ । त्यसतै गाउँगाउँमा जोड्ने बाटो, बत्ती, संचारका सुविधाहरु छैन् ।
कृषि प्रविधि पनि पुरानै रहेको र बजार व्यवस्थापन नभएर पनि कृषकले उत्पादन गरेको खाद्यान्न बस्तु बाटोमै फालफाल भएको विगतको दिनमा देखिएकै कुरा हो । कृषकले पसिना बगाएर उत्पादन गरेको तरकारी प्रतिकेजी ५ रुपैयाका दरले बेच्छन भने त्यही तरकारी दलालले खरिद गरी प्रतिकेजी २० रुपैयाको दरले विक्रि गरिरहेको हुन्छन् । एक त किसानले पारिश्रमिकको फल पनि पाएन्न, अर्को उत्पादित बस्तु विक्रिवितरण गर्ने सुविधा पनि हुदैन् ।
कृषकले पनि व्यापारीहरु जस्तै १२/१५ प्रतिशतको दरमा ऋण लिने गर्छन । माछा पालन, कुखुरा पालन जस्तामा केही सहुलियत दिने सरकारको नीति त छ तर किसानहरुले ऋण पाउ“न सकेका छैनन् । पानी, असिना पर्दा किसानको उत्पादन नष्ट भएर जाने सम्भावना भएको हुनाले कृषि गर्न चुनौती पनि त्यतिकै रहेको छ । तर यसलाई नियन्त्रण गर्न कृषि ईन्सुरेन्सको व्यवस्था कहाँ छ ? अतः किसानको उत्पादन बढाउन जमिनलाई छुने निती ल्याएर अनुभूति र लागु गराउन सकेको छैनांै । त्यसकाराण धैरै किसानहरु कृषि पेशाबाट पलायन भएर अन्य पेशामा गईरहेका छन् । तराईका युवाहरु प्रायः किसानकै छोरा छोरी भएपनि पढेर जागिर खाने कार्यतर्फ मात्र ध्यान दिएको देखिन्छ । जब की अधिकांश युवा÷विधार्थीहरुलाई खेती योग्य जग्गा जमिन पर्याप्त भएकै हुन्छ । तर कृषिलाई उनीहरुले व्यापार ठान्ने न त सोच नै छ, न त कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने सरकारको कुनै नीति नै छ । खेतीपाती गरेर ६ महिना मात्र खान पुग्छ र ६ महिना उनीहरु अन्य काम नै गर्छन् । तसर्थः वर्षभरी काम गरेर उत्पादन गरेको आयले पनि किसानहरु वर्षभरी परिवार पाल्न सक्दैनन् ।
६) विभिन्न समयमा प्रायः ठाउँमा सिचाईको अभावले खडेरी हुनुको साथै लगाईएको बालीमा विभिन्न किरा, खरपातले समेत किसानको लगानी बालुवामा पानी खन्याए जस्तै हुने गरेको वर्षेनी कृषकहरुको गुनासो सुनिने गरिन्छ नी ? यसको दिर्घकालिन उपाय के होला ?
धेरै किसानलाई किटनाशक औषधीको ज्ञान पनि छैन । कृषकहरु विज भण्डारबाट विउ, खाद्यमल खरिद गरी त्यहीबाट प्रयोग गर्ने विधिको बारेमा जानकारी लिन्छन् । जबकी अलिकति पनि औषधीको मात्रा कम वा बढि भयो भने किसानले लगाएको बाली नष्ट हुन्छ । कृषि सम्बन्धी किटानाषक औषधीे हेर्ने व्यवस्थापनको अभाव छ । त्यस्तै यहाँ विक्रिवितरण हुने खाद्य, मल, बिउविजन सबै सक्कली नभएर नक्कली पनि रहेको हुन्छ । खडेरी, असिना पानीको जस्ता समस्याले किसानको बाली नष्ट भएको बेला उनीहरुको न्युनतम क्षति पनि व्यहोर्ने सरकारको कुनै व्यवस्था छैन् । उद्योगधन्धा,फ्याकट्री वा गाडीमा आगो लाग्यो भने ईन्सुरेन्सले खर्च व्यहोर्ने गर्छ भने किसानको बालीनालीमा क्षति भएमा पनि किसानलाई सरल र सुलभ रुपमा कृषि बीमाको अवधारणा ल्याउन पर्छ, जुन हामी कहाँ छैन । किसानको जमिन किसानले मात्रै बेच्ने र त्यो जमिनमा प्लटिङ्ग गर्न नदिई कृषि र कृषिसंग सम्बन्धीत मात्र उद्योगधन्धा खोल्ने, कृषकले उत्पादन गरेको बालीलाई विक्रि वितरण गर्न उचित बजारको पनि व्यवस्था मिलाई सस्तो र सुलभ दरमा ऋण उपलब्ध गराउने बैंक र बीमाको पनि व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
त्यस्तै युवाहरुको आकर्षण बढाउनको लागी कृषि बजारलाई कसरी आधुनिक बजारमा परिणत गर्न सक्छौ भने बारे पनि व्यवस्थापन गरिनु अति नै आवश्यक देखिन्छ । यी यावत कुराको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यो प्रदेशले अन्य प्रदेशलाई पनि प्रेरणा दिन सक्ने उदाहरणको रुपमा बन्न सक्छ ।
७) मेनेजमेन्ट संकाय अन्तर्गत प्रदेश नं. २ कै सबैभन्दा ठुलो कलेज यहाँकै रहेको छ र प्रदेशमा समेत यहाँको कलेज उत्कृष्ट गर्न सफल भएको छ । यहाँ आफै शिक्षा बिज्ञ भएर पनि कृषिसंग सम्बन्धीत कुराको जानकारी हुँदा हुँदा पनि कृषिसंग सम्बन्धी कलेज स्थापना गर्न किन चुक्नु भएको छ ?
यो सम्बन्धी त्रिभुवन विश्व विद्यालयसंग कुरा गरेको छु । कम्तीमा हामीलाई कृषि व्यवस्थापन आफैले सिलेबस बनाएर चलाउन पाउँने अधिकार पनि दिनुपर्छ नि ।
हामीले क्यामपस चलाएको २० वर्ष भईसक्यो र उत्कृष्ट पनि गरेका छौ तर अहिले बल्ल टिउबाट बिबिए पाउन सकेको छौ, अनि कृषिको के कुरा गर्ने । अहिले पनि काठमान्डौंबाट नै टिउको अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारले यसको अनुमति दिनु प¥यो नि । हामी ९शिक्षा० भनेको राज्यलाई परिवर्तन गर्ने माध्यम हो र यो माध्यमलाई प्रयोग र उपयोग राज्यले गर्नु पर्छ ।
राज्यसंग सहकार्य गरेर अहिले पनि म अगाडी जान तयार छु । बिज्ञहरुको विचार अनुसार राज्यले नीति र कार्यक्रम ल्यायो भने हामी राज्यसंग हातोमालो गरेर प्रदेश नम्बर २ लाई नमुना प्रदेश बनाउनको लागी तत्पर छौ । मेरो कलेज व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत भएकोले कृषि व्यापारलाई कसरी उत्पादन गर्न सक्छौ रु कसरी बजारीकरण गर्न सक्छौ भने कुरामा हामी तयार छौ । त्यसकारण राज्यले हामीजस्तालाई उपयोग गर्ने नीति र योजना ल्याउनु प¥यो । जस्तै, वीरगंजमा कृषि ईन्सच्युट खोल्नु छ भने यही सिटीभीटी हुनु प¥यो ।
अहिले एग्रिकलचर यूनिभर्सिटी चितवनलाई दिएको छ । तर त्यहाबाट हामीले सम्बद्धता मांग गर्नै सक्दैनौ । त्यसकारण राज्यले कृषि कलेज, ईन्सच्युट खोल्ने नीतिगत नियम सहित किसानको भलो हुने नीतिगत योजना ल्याउनु पर्छ र त्यस अनुसारको कार्य गर्न वातावरण सृजना गर्नु पर्छ । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर नीतिगत रुपमा किसान र किसानको हितलाई अगाडी बढाएर राख्यौ भने अरु प्रदेशभन्दा उत्कृष्ट र अरुको प्रेरणादायी बन्न यो प्रदेश सफल हुन सक्छ ।
८) पर्सा, बाराका किसान नगदेबाली उखु खेतीतर्फ बढि आकर्षण भएको देखिन्छ । तर कृषकले उत्पादन गरेको बाली समयमा बिक्रि वितरण नभएर र विक्रि भएको बालीको भुक्तानी समयमा नपाएर बेलाबेलामा किसानले पिडा खेप्नु परेको अवस्था छ नी ? यो समस्याको निराकरणको उपाय के होला ?
भारतमा सरकारले किसानलाई पहिले पैसा दिन्छ वा भुक्तानी गर्छ । अनि मात्र उखु काटेर किसानले विक्रि गर्ने गर्छन् । त्यहाँको किसान अहिले गदगद छन् । उत्तर प्रदेशमा किसानको उखुको भाऊ सरकारले बढायो । किसानको बाली समयमा किन्ने, भुक्तानी पनि दिने कति राम्रो नीति ल्याएको छ । तर हाम्रो देशमा एक त कृषकलाई उखु खेती गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसमा पनि मुल्य बढाऊ, समयमा मुल्य पाएन, उखु सुक्यो जस्ता विभिन्न कुराको समस्याले जहिले पनि चिनी कारखाना र किसानविच विवादै हुन्छ ।
प्रदेश नम्बर २ मा कृषिमा आधारित ठुल९ठुला उधोग, कलकरखाना धरासयमा गईरहेका छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगंज चिनीमिल कारखाना र कृषि औजार कारखाना तराई खास गरी प्रदेश नम्बर २ को मेरुदण्ड हो । धनुष, सप्तरी, सर्लाहीतिरका भूमी धान उत्पादन भन्दा पनि सुर्तीको लागी राम्रो ठाउँ थियो । चुरोट कारखाना बन्द भएपछि जति पनि खेतमा सूर्ति रोपिन्थ्यो त्यो खेत त अहिले सुख्खा हेर्छौ । त्यस्तै बारा, पर्सा, रौटहत उखु उत्पादनको लागी राम्रो थियो तर हजारौ किसानलाई पाल्ने चिनीमिल र कृषि औजार कारखाना पशुपतिको आर्यघाटमा स्ुतेजस्तो सुतिरहेको छ । न मर्न सकेको छ न बाँच्न सकेको छ । जसले किसानलाई धेरै नै मर्मा्हित बनाएको छ ।
९) विगत लामो समयदेखि वीरगंजको कृषि औजार कारखाना बन्द भएर हालसम्म संचालन हुन नसक्नुको कारण के होला ?
कुनै समयमा कृषि औजार कारखाना नेपालकै सबैभन्दा नाफामुखी औजारको रुपमा थियो । त्यसले गरेको उत्पादन धेरै नै राम्रो थियो । तर समय अनुसार कृषिमा पनि परिवर्तन भयो । थ्रेसरदेखि कटानी, रोपाई जस्ता विभिन्न आधुनिक प्राविधिको विकास भईसकेको छ । अब कृषि औजार कारखानाको पहिलाकै हसिया, बेल्चा हथियारको प्रयोग गरि उत्पादन गरेर चल्छ त ? आध्निकतासंगैको प्राविधी बनाउनु प¥यो नि त ? चिनीमिल कारखानालाई आधुनिकतासंग नलागि राजनीति गर्ने आख“डाको रुपमा मात्रै प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
कृषिको नाममा उत्पादन गर्ने, काम पाउँने, काम दिने तर कृषिलाई आधुनिकरण अनुसार उद्योगको विधिलाई विकास गर्न सकेनौ । तदापी थ्रेसरको जामानामा हसियाले काम गरेर हु्न्छ त ?
१०) यो कारखाना संचालन भईदिएको भए कृषि क्षेत्रमा के कस्तो परिवर्तन हुन सक्छ ?
कृषि औजार कारखानालाई अहिले पनि संचालनमा ल्याउन सकिन्छ । आफैले नगरे पनि भारतको ठुल९ठुला कम्पतीहरु कृषि औजारको उत्पादन गर्छन । थ्रेसर, ट्रयाक्टरदेखि दाउने, रोप्ने जस्ता धेरै ठुल९ठुला मेसिन बनि सकेका छन् । उनीहरुसंग सहकार्य गरेर यो मेसिनको उत्पादन नेपालमै ग¥यो भने सस्तो र सुल्भ दरमा हामीले किसानलाई दिन सक्छौ ।
हामी त्यही कृषि औजार कारखानालाई चाहिने कुरामा त्यसरी नै रुपान्तरण गरेर विकास गर्न सक्छौ । जसले किसानलाई धेरै फाईदा भएर धेरै ठाउँमा कृषि सम्बन्धी सानो पोलि टेक्निकस ईन्सच्युट पनि खोल्न सक्छौ । जसले बारा, पर्सा र रौतहटका जनतालाई आधुनिक उपकरणबाट कसरी कृषि उ्रत्पादन गर्ने, कसरी बजारीकरण गर्ने भने बारे ज्ञान दिन सकिन्छ । तसर्थः कृषि (ईन्सच्युट) संस्था खोल्न पाएको खण्डमा कृषि औजार कारखाना र कृषि विकासको लागी ठुलो योगदान हुन सक्छ ।
११) यो कारखाना संचालन गराउनको लागी कुन कुन पक्षले भूमिका खेल्नु पर्ने आवश्यक रहेको छ जस्तो लाग्छ ?
कृषि औजार कारखाना, वीरगंज चिनी मिल कारखाना पूर्ण रुपले बन्द पनि भएको छैन र खुलेको पनि छैनन् । नाही मर्न सकेको छ, नाही बाँच्नै सकेको छ । र यसमा पनि राजनीति माथि नै राजनीति भईरहेको हुन्छ । एक पक्षले खोल्नु पर्छ भन्छ भने अर्को पक्षले खुल्न सक्दैन भन्छ । यो भनेको राजनीति कुरा मात्रै हो । तर प्राविधिक रुपले हेर्ने हो भने अहिले भएको मेसिन, औजारबाट कृषि औजार, चिनी मिल कारखाना चल्ने छैन् । संचालन नै गर्नु छ भने आधुनिक कारखाना संचालन गर्नु पर्छ नी । यही मेसिन चलायो भने उत्पादन भन्दा लगानी नै बढि हुन्छ ।
आजकालको त सानो सानो चिनी कारखानाले त्यो भन्दा कम लागतमा बढि उत्पादन गर्ने भईसकेका छन् । त्यसकारण त्यो संरचनालाई देखाएर खोल्छु भन्ने हुदैन् । अहिलेको त मेसिन कामै लाग्दैन ।
अहिले त एकसे एक व्यवसायिकता छ नि त । कुनै पनि कारखाना संचालन गर्नको लागी सबैभन्दा पहिला संरचना राखेर त्यस अनुसारको बजेटको लागनी गर्नु पर्छ । त्यसकारण बिज्ञहरुसंग समन्वय गरी आधुनिक तरिकाले यो कारखाना संचलानमा ल्याउन लाग्नु पर्छ । हचुवाको बलमा खोल्नु भनेको बालुवामा पानी खन्याए जस्तै हुन्छ । किसानले उत्पादन गरेको उखुको व्यवस्थापनको लागी कृषि औजार कारखाना, र चिनीमिल कारखाना खोल्नु पर्छ ।
अब चिनीमिल खाराखाना खेल्नको लागी कस्तो कारखाना र कुन ठाउँमा खोल्ने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने तर्फ पुर्ण योजना बनाएर त्यसलाई संचालन गर्ने नीतिगत तर्फ लाग्यौ भने त्यो चल्छ । होईन भने राजनीतिक नाराले यसैलाई चलाउने बन्द गर्ने भनेपछि जति पनि पूँजी लगानी हुन्छ त्यो बालुवामा पानी खन्याए जस्तै हुन्छ ।
अहिलेको चिनीमिल कारखाना त वीरगंजको मुटु भईसकेको छ । सरकारलाई चिनीमिल कारखाना खोल्नु छ भने त्यही खोल्न जरुरी छैन । त्यो त अर्बौको सम्पति भईसकेको छ । यसको आधा लगानीमा पर्साको ग्रमिण भेगमा आधुनिक कारखाना खोल्न सक्छौ र यो ठाउँ कृषि औजारकै स्वामित्वमा रहेकोले बजार बनाउने, कृषि ईन्सच्युट खोल्ने, वा अन्य कुनै कार्यको लागी सदुपयोग गर्ने बारेमा एउटा ब्रान्ड रोड म्याप बनाएर संचालनमा ल्यायो भने यसको विकास हुन सक्छ ।
कोरोना भाइरससंग लडन प्रदेश सरकारद्वारा नारायणी अस्पताललाई ३ करोड ९ लाख ५० हजार रकम
११ महिनादेखी तलब नपाएको भन्दै विन्दबासिनी गाउँपालिकामा कर्मचारीले गरे तालाबन्दी
नारायणी अस्पतलामा डायलाईसिस र आकास्मिक सेवा पुनः संचालन
नेपालमै कोरोनाविरुद्ध खोप तयार गरेको जिकिर, परीक्षणको माग
प्रदेश २ मा आइतबार बिहान मात्रै ६० जनामा कोरोना पुष्टि
यो वर्ष आउन सक्छ चीनबाट कोरोनाको भ्याक्सिन
१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार ००:३६
१८ जेष्ठ २०७७, आईतवार २०:३९
१८ जेष्ठ २०७७, आईतवार २०:१७
१८ जेष्ठ २०७७, आईतवार १४:३३
१८ जेष्ठ २०७७, आईतवार १४:११
१८ जेष्ठ २०७७, आईतवार १०:११